China PALLET&BASKET/BOTTLE&CAN WASHING MACHINE mpanamboatra sy mpamatsy |INCHOI
◆Ny fitaovana dia SUS304 stainless vy.mifanaraka amin'ny fepetra takian'ny GMP/HACCP.
◆ Namboarina miaraka amin'ny rafitra famafazana rano & fanafanana & maina mba hahazoana ny vokatra fanadiovana tsara indrindra.
◆Ny mari-pana dia azo amboarina sy voafehy ho azy.
◆Ny famolavolana damper tokana dia afaka mahafeno ny fepetra takiana amin'ny fanadiovana ny habe samihafa amin'ny fitaovana iray.
◆ Ampiharo ny fitsipiky ny hafainganam-pandehan'ny fiovam-po, hampihenana ny herin'ny asa, hanatsara ny fahombiazan'ny famokarana ary ny fiainana maharitra.
◆Azo atao maina amin'ny rivotra sy maina ny elatra.
Ny mpanasa harona vaovao tsy miankina novolavolaina sy novokarin'ny orinasanay dia noraisin'ny mpanjifa taloha sy vaovao hatramin'ny nanombohany teo amin'ny tsena. mpanampy vaovao amin'ny rohy fanamboarana fanodinana sakafo.
1. Ny fampitaovana ampahany amin'ny milina dia vita amin'ny SUS304 stainless vy, asidra-porofo, miasa mafy, fiainana maharitra, tsy misy loto faharoa..
2. Ny ampahany mitondra fiara dia mampiasa motera mifehy ny hafainganam-pandeha elektronika, ny hafainganam-pandehan'ny hazakazaka dia azo amboarina amin'ny fiovam-po matetika.
3. Fanadiovana efatra, azo averina ny rano, mitsitsy angovo sy rano. Ny fizarana tsirairay dia misy sivana maromaro maromaro mba hisorohana ny fanakanana ny nozzle. Miaraka amin'ny fitaovana fanaraha-maso ny rano mandeha ho azy, raha toa ka simba ny paompy rano noho ny tsy fahampian'ny rano.
4. Ny milina iray manontolo dia mampiasa profil stainless vy avo lenta.
5. Ny harona fihodinana dia mahatratra ny vokatra fanadiovana mahomby, mampihena ny vidin'ny asa, mampihena ny henjana amin'ny asa, ny fahombiazan'ny departemanta ara-teknika dia miorina tsara, ny fahombiazany dia avo.
Fanasan-dambadia ampiasaina amin'ny fanadiovana sy ny sterilization ny mihodinkodina harona, lovia, atody trays, bobongolo sns.Aorian'ny fanadiovana ny fitoeran-javatra dia manana zanatany maromaro mifanaraka amin'ny firenena fepetra fiarovana ara-tsakafo. .Azo mivantana ho an'ny fanasan-damba, ary manana taham-pahavitrihana ambany izy, fampisehoana maharitra. Ny mpanasa boaty fihodinana dia afaka manolo ny fanadiovana artifisialy nentim-paharazana, mahafeno ny fepetra takiana amin'ny fanadiovana harona be dia be amin'ny orinasa sakafo. Ampiasaina betsaka amin'ny indostrian-kena, indostrian'ny mofo indostrian'ny sakafo haingana, indostrian'ny fambolena voankazo sy legioma ary indostria hafa.
Ahoana ny fiasan'ny milina
Fomba fanadiovana dingana efatra no raisina,
Ny dingana voalohany dia ny fanadiovana avo lenta, izay mampifanaraka ny fomba fanondrahana amin'ny fomba fanadiovana nentim-paharazana.
Ny dingana faharoa dia ny fanasan-damba fanerena, izay manala ny fitaovana adhesion eny ambonin'ny harona mihodinkodina amin'ny alàlan'ny fanerena avo mba hahatanteraka ny tanjon'ny fanadiovana ny tasy.
Ny dingana fahatelo dia kobanina amin'ny rano madio, ary kobanina amin'ny rano mandeha madio ny eny ambonin'ny harona mihodinkodina.Satria ho maloto ny rano ao amin'ny siny roa voalohany aorian'ny fanodinana, dia hosasana amin'ny rano madio ny rano fanadiovana sisa amin'ny dingana roa voalohany.
Ny dingana fahefatra dia fanadiovana, ary avy eo sasana tsara amin'ny rano madio mba hadio tsy misy tavela ny ambonin'ny boaty.
teo aloha: PASTEURIZATION / COOLING LINE
Manaraka: MULTI-SOROKA MITOHY MITOHY TARIKA
milina fanasan-tavoahangy mandeha ho azy
milina fanasan-damba automatique
milina fanasan-damba plastika pallet
Milina fanasan-damba misy harona
Legioma ravin-kazo roa ao anaty fanasan-drivotra iray...
Air energy intelligent drying line